ỊWỤNYE GAM AKPORO NA VIRTUALBOX - VIRTUALBOX - 2019
Site na VirtualBox, ị nwere ike ịmepụta igwefoto arụmọrụ na ọtụtụ ụdị sistemụ, ọbụna na mobile gam akporo. N'isiokwu a, ị ga-amụta otú ị ga-esi wụnye ọhụrụ nke gam akporo dị ka os os os.
Hụkwa: Wụnye, jiri ma hazie VirtualBox
Na nbudata foto gam akporo
Na mbido mbụ, ọ gaghị ekwe omume ịwụnye gam akporo na igwe arụmọrụ, ndị na-emepe emepe adịghịkwa enye nsụgharị ported maka PC. Ị nwere ike ibudata na saịtị ahụ nke na-enye nsụgharị dị iche iche nke gam akporo maka nwụnye na kọmputa gị, site na njikọ a.
Na ibe ebudata ị ga-achọ ịhọrọ os os na nha omimi ya. Na nseta ihuenyo n'okpuru, a na-eme ka gam akporo version pụta ìhè na akara akara edo edo, na faịlụ ndị nwere ikike nchịkọta na-egosi na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Iji budata, họrọ ISO-eserese.
Dabere na nsụgharị ahụ a họọrọ, a ga-akpọrọ gị gaa na peeji nke nwere nbudata ma ọ bụ ngosipụta a tụkwasịrị obi maka nbudata.
Mepụta igwe mebere
Mgbe a na-ebudata ihe oyiyi ahụ, mepụta igwefoto a rụrụ arụ nke a ga-arụ ọrụ.
Na VirtualBox Manager, pịa bọtịnụ "Mepụta".
Dejupụta n'ubi dị ka ndị a:
Aha mbu: Android
Version: Linux ndị ọzọ (32-bit) ma ọ bụ (64-bit).
Maka ọrụ siri ike na nke ọma na os, họrọ 512 MB ma ọ bụ 1024 MB RAM.
Hapụ ihe nkwalite ihe ọkpụkpụ a rụrụ.
Ụdị ụdị nkwekọrịta VDI.
Agbanwela usoro nchekwa ahụ.
Tọọ ogo nke diski ike dị na 8 GB. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịwụnye na ngwa ngwa Android, wepụtazie ohere ohere.
Nhazi Nhazi Ngwaọrụ
Tupu ịmalite, hazie gam akporo:
Pịa bọtịnụ ahụ "Hazie".
Gaa "Usoro" > "Nhazi", tinye 2 cores processor ma rụọ ọrụ PAE / NX.
Gaa "Gosi", tinye ebe nchekwa vidiyo dị na uche gị (karịa, ka mma), ma gbanye Ọganihu 3D.
Ntọala ndị fọdụrụ - dịka ọchịchọ gị.
Malite igwe kwadoro ma mee nhazi nke gam akporo:
Na VirtualBox Manager, pịa bọtịnụ "Gbaa ọsọ".
Dị ka disk buut, ezipụta foto ahụ na android ị ebudatara. Ka ịhọrọ faịlụ, pịa akara ngosi na folda ma chọta ya site na onye nyochaa usoro ihe.
Buut menu ga-emeghe. N'ime ụzọ dịnụ, họrọ "Wụnye - Wụnye Android x86 ka harddisk".
The installer amalite.
Mee ka echichi ahụ jiri igodo Tinye na akụ na keyboard.
A ga-akpali gị ịhọrọ nkewa iji wụnye sistemụ arụmọrụ. Pịa na "Mepụta / gbanwee akụkụ".
Zaa na ntinye iji GPT "Mba".
Ihe ọrụ ahụ ga-ebu cfdisk, nke ị ga-achọ ịmepụta nkewa ma debe ya ụfọdụ parameters. Họrọ "Ọhụrụ" ịmepụta ngalaba.
Nyefee nkebi na isi site na ịhọrọ "Isi".
N'ebe ị na-ahọrọ olu nke ngalaba, jiri ihe niile dị. Site na ndabara, onye nhazi ahụ abanyelarị ohere niile, wee pịa Tinye.
Mee ka nkebi ahụ nwee ike ịme ya "Bootable".
A na-egosipụta nke a na kọlụm flags.
Tinye mpaghara niile ahọrọ site na ịhọrọ bọtịnụ "Dee".
Dee okwu iji gosi "ee" wee pịa Tinye.
E gosipụtaghị okwu a kpamkpam, ma edere ya na njupụta.
Ngwa nke ntinye ga-amalite.
Iji pụọ na ọrụ cfdisk, họrọ bọtịnụ "Kwụsị".
A ga-alaghachi gị na windo ntinye. Họrọ akụkụ nke ekepụtara - A ga-arụ ọrụ gam akporo na ya.
Dezie nkebi na usoro faịlụ "ext4".
Na windo nkwenye, họrọ "Ee".
Zaa aro ka ị wụnye GRUB bootloader "Ee".
Ngwaọrụ Android ga-amalite, chere.
Mgbe echichi ahụ zuru oke, a ga-akpali gị ịmalite usoro ma ọ bụ malitegharịa igwe arụmọrụ. Họrọ ihe achọrọ.
Mgbe ịmalite gam akporo, ị ga-ahụ akwụkwọ njirimara.
Na-esote, ịkwesịrị igbanye usoro ahụ. Họrọ asụsụ achọrọ.
Njikwa na interface a nwere ike ịbụ ihe na-adịghị mma - iji mee ka ọkpụkpọ ahụ gaa, bọtịnụ mkpọtụ aka ekpe ga-agbada.
Họrọ ma ịchọrọ ịdepụta ntọala Android site na ngwaọrụ gị (site n'aka smartphone ma ọ bụ site na nchekwa igwe ojii), ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ị nweta ọhụụ, os dị ọcha. Ọ ka mma ịhọrọ nhọrọ 2.
Inyocha maka mmelite ga-amalite.
Banye na Akaụntụ Google gị ma ọ bụ mee ka nzọụkwụ a daa.
Gbanwee oge na oge ọ dị mkpa.
Tinye aha njirimara gị.
Hazie ntọala ma gbanyụọ ndị ị na-adịghị mkpa.
Debe nhọrọ di elu ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Mgbe ị dị njikere iji mebie ntọala mbụ nke gam akporo, pịa bọtịnụ ahụ "Emere".
Chere mgbe usoro ahụ na-eme ntọala gị ma mepụta akaụntụ.
Mgbe nhazi na nhazi nke ọma, a ga-akpọrọ gị na desktọọpụ Android.
Gbaa Android mgbe nwụnye
Tupu nbido ụda nke igwe arụmọrụ na gam akporo, ịkwesịrị iwepụ ihe oyiyi ahụ eji rụọ ọrụ sistemụ. Ma ọ bụghị ya, kama ịmalite os, a ga-ebugo njikwa boot na oge ọ bụla.
Gaa na ntọala nke igwe kwadoro.
Pịa taabụ "Ndị na-ebugharị", gosi ihe oyiyi ISO nke installer wee pịa akara ngosi.
VirtualBox ga-ajụ maka nkwenye nke omume gị, pịa bọtịnụ ahụ "Hichapụ".
Usoro nke ịwụnye gam akporo na VirtualBox abụghị ihe mgbagwoju anya, Otú ọ dị, usoro nke osụ ọrụ a nwere ike ọ gaghị edozi ndị ọrụ niile. Ọ dị mma ịchọrọ na e nwere ndị ọkachamara gam akporo ndị nwere ike ịba uru karịa gị. Onye a ma ama n'ime ha bụ BlueStacks, nke na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ bụrụ na ọ gaghị adịrị gị, lelee ya ndị enyi gam akporo.